विष्णु पौडेलले बालुवाटार राजाको पालामा किनेको प्रधानमन्त्रीको खुलासा - LiveMandu
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारको जाग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडेर सरकार र पार्टीलाइ कमजोर बनाउने खेल भएको बताएका छन । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राजाको शासनका बेला उहाँले जमिन किन्नु भएको रहेछ ।’
पौडेलले किनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गाभित्र पर्छ कि पर्दैन ? जालझेलभित्र पर्छ कि पर्दैन ? हडपेको हो कि होइन सबै तथ्यसहित प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। सांसदहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्यगग आधारमा अध्ययन गरेर संसद्मा पेस हुन आग्रह गरे। उनले विकास निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।
अमेरिकामा पनि बाबाको सांगीतिक यात्रा पछ्याउँदै गुञ्जन (हेर्नुस् भिडियो सहित )